Bulshooyinka Dhaladka ah ee Washington - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Bulshooyinka Dhaladka ah ee Washington
Bulshooyinka Dhaladka ah ee Washington
CHPW waxay leedahay Xiriir Qabiil oo heegan ah si aan si fiican ugu adeegno xubnaha ka tirsan 29ka qabiil ee Washington ay federaalku aqoonsan yahay.
U adeegida Dadka Dhaladka ah ee Washington: Hindida Magaalada, Hindida Mareykanka, iyo Dhaladka Alaska
Tan iyo aasaaskeenii, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu ka shaqeeyay sidii loola dhaqmi lahaa xubin kasta oo ka mid ah xubnaheenna qof ahaan. Taasi waxay ka dhigan tahay ixtiraamka baahiyaha shaqsiyeed, khibradaha, iyo yoolalka xubnaheenna.
Waxaan la kulannaa xubnaha halka ay joogaan waxaanna ka qabannaa adeegyo tayo sare leh beeshooda dhexdeeda. Xubnaha u aqoonsaday Dhalad Mareykan ama Dhalad Alaska ah, daryeelkaaga ayaa la daboolayaa haddii aad dooratid inaad aragtid bixiye Caafimaad Qabiil ama mid kamid ah bixiyeyaasha shabakadeena.
Magaalada Washington waxaa ku yaal 29 qabiilo oo federaalku aqoonsan yahay. Qabiil kastaa waa mid gaar ah, qofkasta oo Hindi Mareykan ah ama Alaskan Asal ahaan kasoo jeeda oo la aqoonsaday wuxuu la kulmaa dhaqankooda qaab u gaar ah. Ixtiraamka aqoonsiga dhaqanka waa udub dhexaadka habka jaaliyadeenna ee ku wajahan daryeelka.
Xiriiriyaha Qabiilkeena, Natalie Christopherson, wuxuu ku saleysan yahay harada Moses waxayna xubin ka tahay Cherokee Nation. Waxay halkan u joogtaa inay u dooddo baahiyahaaga oo ay kuu noqoto kheyraad adiga kugu habboon.
To Baro Natalie
Faa'iidooyinka qorshaha caafimaadka CHPW
CHPW waxay bixisaa ilo si ay uga caawiso xubnaha inay xakameeyaan caafimaadkooda.
Marka lagu daro daryeelka aasaasiga ah, daryeelka gaarka ah, iyo caymiska dawada dhakhtarku qoro, waxaan ku soo qaadaneynaa adeegyada ku saleysan gobolka iyo bulshada si xubnaha looga caawiyo inay caafimaad qabaan inta u dhexeysa baaritaanada. Waxaan aaminsanahay taas caafimaadku wuxuu ka badan yahay oo keliya inuu arko daryeel-bixiye, iyo qayb ka mid ah shaqadeena maadaama qorshahaaga caafimaad uu kaa caawinayo inaad hesho dhammaan adeegyada aad u baahan tahay.
Ma lihid lacag-bixinno markii aad ka hesho adeeg bixiyaha shabakadda adeeg caymis leh ama la oggolaaday. CHPW waxay bixisaa helitaan buuxa ee adeegyada Apple Health, oo ay kamid yihiin:
Daryeelka kahortaga: baaritaanada, baaritaanada, talaalada
Daryeelka caafimaadka maskaxda bukaan socodka
Caafimaadka maskaxda ee isku dhafan iyo daryeelka isticmaalka maandooriyaha
Adeegyada caafimaadka haweenka iyo qorsheynta qoyska
Caawi socodka nidaamka caafimaadka iyo helitaanka baahiyahaaga
Waxaan kaa caawinayaa isku xirka adeegyada iyo ilaha bulshada ku saleysan
U hel caymis iyo dheefaha gobolkaaga
Xubin kasta oo ka tirsan CHPW sidoo kale wuxuu marin u leeyahay barnaamijyada abaalmarinta iyo faa'iidooyinka dheeraadka ah.
➔ Baadh barnaamijyada waxtarka CHPW
Waxaan Qireynaa Nolosheena Maalinlaha ah ee Ka Dhaceysa Dhulka Qabiil
Anaga oo degan Washington, nolol maalmeedkeennu wuxuu ka dhacayaa dhulalka dadka Asaliga ah. Waxay xanaaneynayeen dhulkan kumanaan sano kahor intaan laga xadin. Hase yeeshe dadka asaliga ah ee Washington way badbaadaan oo wey barwaaqoobaan maanta, waxayna tusaale u yihiin geesinimada, adkeysiga, iyo bulshada.
Xarunta CHPW ee Seattle waxay ku taal dhulalka soo jireenka ah ee Qabiilka Duwamish. Seattle waxaa daboolaya heshiiskii Point Elliott, oo lagu saxeexay si khasab ah 1855.
Our Spokane xafiisku wuxuu ku yaal dhulalka dhaqameed ee Spokane Tribe of Indian iyo The Confederated Tribes of Colville Reservation.
Our Southwest xafiisku wuxuu ku yaal dhulalka dhaqameed ee Qabiilka Cowlitz.
Our Columbia Weyn xafiisku wuxuu ku yaal dhulalka dhaqameed ee Yakama Nation iyo Qabiilooyinka Isbahaysiga ee Boos celinta Umatilla.
Our Dhawaaq Waqooyi xafiisku wuxuu ku yaal dhulalka dhaqameed ee Xeebta Salishka.
Dhammaan heshiisyada waxaa ku jiray ballanqaad daryeel caafimaad. Sidaa darteed, shaqada CHPW ma aha oo kaliya adeeg, laakiin waa mas'uuliyad. Waxaan ballanqaadeynaa inaan taageerno deriskeena AI / AN maadaama aan si wadajir ah ugu shaqeyneyno bulshooyinka caafimaadka qaba.
CHPW waxay leedahay shabakad balaaran oo bixiyeyaal, rugo caafimaad, isbitaalo, iyo farmashiyeyaal ku baahsan gobolka. Marka qof noo doorto qorshahooda caafimaad, waxaan u qaadaneynaa masuuliyadaas si dhab ah. Waxaan ka mahadcelineynaa kalsoonida xubnaheena ay nagu aaminaan inay noqdaan lamaanahaaga caafimaadka.
La xiriir Natalie Nala soo qor
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Janaayo 4, 2022